Deg Deg Daawo Video:Kulan dag dag ah oo dawlada Soomaaliya u Fadhiisatay, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo Video:Kulan dag dag ah oo dawlada Soomaaliya u Fadhiisatay,
Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumada Soomaaliya iyo Taliska Ciidanka Booliska ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay dadkii shacabka ahaa ee shalay sida naxariis darada ah loogu laayay deegaanka Xaawo Cabdi ee Duleedka magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa intii uu socday looga hadlay dhacdada lagu laayay dadkii ka shaqeenayay olalaha nadaafada iyo sidii loo ogaan lahaa cidii ka dambeesay falkaasi lagu laayay 9-ka qofood ee haweenka u badnaa.
Wasiirka Amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa faray saraakiisha laanta dambi baarista booliiska ee CID-da in baaritaano deg deg ah ku sameeyaan falkaasi dadka shacabka ah lagu laayay sida ay u ku dhacday iyo cidii ka dambeesay.
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in xarunta Dambi baarista CID-da looga yeeray maamulka deegaanka Lafoole iyo saraakiisha amaanka deegaankaasi, kuwaa oo wax laga weediinayo dadka la laayay iyo sida amaankooda loo dayacay.
Wasaarada Amniga gudaha Soomaaliya ayaa dooneysa in la helo meel loo raacdo dadka sida gardarada ah loo laayay, waxa ayna Wasaarada amartay in lasoo qabto dadkii ka dambeeyay falkaasi foosha xun ee shacabka lagu laayay.
Ma jirto wali cid sheegatay masuuliyada dadkan shacabka ah ee lagu laayay deegaanka Xaawa Cabdi ee kuyaala inta u Dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye, maamulka Shabeelaha Hoose ayaan weerarkan ku eedeeyay Al Shabaab.
Previous Post: War Deg Deg Ah::Wasiirka Arimaha Dibadda oo si lama filaan ah isku casilay
Next Post: Deg Deg:Madaxweyne Farmaajo Hada Ka Boqoolay Dalka iyo halku Ku Jeedo?